Madagasikara: Mivarotra ny Tena Ho Vadiana, Ny Zavamisy Mangidin’ny Fahantrana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Aogositra 2018 15:29 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Novambra 2008)
Amin'ny maha-mpanao gazety sy olom-pirenena malagasy ahy, matetika aho no miezaka manipika ireo fandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy vitan'i Madagasikara. Inoako tokoa fa tsy dia asiana fifantohana firy amin'ireo ezaka sy fahaiza-mamorona asehon'ireo olom-pirenena malagasy, izay miasa ho amin'ny fanatsaràna ny fepetra iainana ao amin'ny fireneny.
Na izany aza anefa, matetika tsy vita ny hitazonana fijery miabo manoloana ny hamafin'ny toe-draharaha ara-toekarena. Tato anatin'nfy fotoana vitsivitsy farany, tsy afaka ireo blaogera ny tsy hiady hevitra mikasika ny hamafin'ny zava-misy amin'ny fahantrana mitarazoka, izay miantraika amin'ny ankamaroan'ny mponina ao amin'ny nosy. Ireto no ohatra vitsivitsy mampiseho anosehan'ny fahantrana ny olona tsy handray fanapahankevitra henjana.
Patricia, izay nandraisan'ny blaogy “Pati sy ianao” anjara tamin'ny tetikasa median'ny olom-pirenena Foko, ary nanana fahafahana ihany koa nisolo tena an'io tetikasa io sy ny fireneny nandritra ny Andro Fankalazana ny Fifampiankinana, tao Bruxelles (ny 10-12 septambra 2008), mitatitra eo amin'ny blaoginy an'ireo tranga mahakasika an'ireo tovovavy izay amidin'ireo ray amandreniny (sic):
Iray monja amin'ireo tranga mitovitovy aminy hita ao amin'ny nosy ity tantara ity.
Ho an'ny sasany, ifanarahan'ireo ray amandreny sy ireo tovovavy ny amin'ny [momba ny] olona izay hividy an'ilay tovovavy ary amin'ny [momba ny] vidiny na ny fanomezana ho takalony. Tsy maintsy tsindriana tsara fa tsy voatery vahiny akory ny mpividy saingy tranga mateti-pitranga fotsiny io amin'ny ankapobeny. Ho an'ireo tranga hafa, miseho amin'ny endrika fanerena izy io, ireo ray amandreny no mandidy ary mpanatanteraka ilay tovovavy!
Ny tranga farany nivoaka dia ny an'ilay zaza tsy ampy taona, 15 taona, izay nomena vahiny ho takalon'ny vola 200 000 Ariary [zato euro eo]. Nampanantena mihitsy aza ilay vahiny fa alainy ho vady ilay zaza, saingy raha vao vita ny fiarahany natory taminy indray alina monja ka nanimbàny ny maha-virijiny azy [simba], nateriny tany amin-drainy ilay zaza.
(sary: Hebdo de Madagascar sy Foko)
News2dago [amin'ny teny gasy] manamafy fa niparitaka vetivety ny nofinofy hanambady vazaha:
Tonga eto Madagasikara ireo “masoivoho mpanera vady” mba hitady vehivavy malagasy te-hanambady vazaha. Gaga fotsiny aho nahita tatitra an-gazety fa maherin'ny 4.000 izy ireo no milingilingy te-hanambady vazaha. Ary voalaza fa arahan-dranomaso mihitsy ny an'ireo izay tsy lany. Dia tena andro ratsy tokoa rehefa misy iray tavela mitalaho vazaha iray haka azy hiaraka aminy.
Nisy fihetsehampo maro ireo tao anatin'ireo fanehoankevitra tamin'ity lahatsoratra ity. Manamarika ny Tritriva fa tsy ny vehivavy irery ihany no mikatsaka ny hanambady vazaha. Mieritreritra i Sylvie fa tsy zavatra ratsy ny manambady vazaha, saingy mila fantarina tsara fotsiny hoe tsy nanan-janaka izy tamin'ilay vadiny teo aloha, satria tsy hanaja an'ireo renikeliny mhitsy izy ireo, ary hiaro an'ireo zanany foana ilay rangahy. Manampy i Maintikely fa tsy tokony haingana ny fitsaratsaràna ary tokony hajaina ny safidin'ireo vehivavy. Mampiomana an'ireo vehivavy izy fa tsy voatery ho tsara foana araka izay noeritreretiny ny fiainana any ivelany.
Vavolombelona tamina tranga iray mampalahelo mikasika ny fahantrana i Lomelle izay manoratra blaogy ao amin'ny Foko avy any Mahajanga.
Nantsoina izahay mba hanao fanadihadiana tany Andralanitra. Nandeha izahay sy Rondro, samy tsy dia nisy nahalala izay niandry anay tany. Fanadihadiana mikasika an'ireo fako fotsiny no hany fantatray […] Fiarabe mpandroaka fako iray no nandeha teo alohan'ny fiaranay tamin'ny fotoana izay nanantonanay ny toerana. Nony teo ampahatongavana, naongany avokoa ireo fako ary tamin'io fotoana io indrindra no […] olona telopolo teo ho eo no indreny nifandrombaka tamin'ireo fako […] Rikoriko, izay no teny azoko ambara tamin'io fotoana io. Rikoriko ho an'ireo olona rehetra izay tsy manana afatsy ireo fako ireo mba hivelomana […] Rikoriko ho an'ny fihetsika nanilikilika noraisko tamin'io fotoana io. Nihevitra ny tenako mba ho vehivavy malala-tsaina ihany aho, tsy mitsaratsara an-tendrony, na mitsaratsara fotsiny. Nefa nanoloana an'io tranga io fikasàna iray ihany no tao an-tsaiko, hiala malaky eo ary hihataka an'ireo olona ireo.
Manana fijery hafa i Micramia mikasika ny olana vokatry ny fahantrana sy ny fahatsapany, manazava fa tsy aretina tsy azo sitranina akory io:
Raha mbola afaka mihinana ara-dalàna ianao isanandro, dia tsy mahantra. Saingy azo sitranina ny fahantrana. Araka ny hevitro, ny fahantrana dia vokatry ny tsy fahampiana fisainana. Ireo izay tsy mampiasa ny lohany ihany no tsy lasa lavitra. Mahantra ara-tsaina izy ireo ary rehefa tsy misy n'inona n'inona ao an-doha, ahoana moa no hananana vola hividianana sakafo […] Ny fanitaran-tsaina sy ny fampitomboana ny fahalalan'ny tena no vahaolana.